တစ်ဦး visualization ဘုတ်အဖွဲ့အလိုဆန္ဒများကိုလုပ်လုပ်နည်း - Feng Shui ၏ဘုတ်အဖွဲ့ပုံရိပ်အလိုဆန္ဒများ?
ဘုတ်အဖွဲ့ Visual အလိုရှိ - ထိရောက်မှုထိခိုက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုတက်ဆွဲ
မြင်သာထင်သာဖြစ်ကြပြီးမကြာခဏဟာအလွန်အားကောင်းတဲ့အလိုဆန္ဒ၏အိပ်မက်နားလည်သဘောပေါက်စေရန်ကူညီပေးသည် - ဒါဟာရှည်လျားအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အတှေးအကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ သို့သော်သာချင် - မလုံလောကျပိုမြားနှငျ့ သာ. ကြီးမြတ်စိတ်ခံစားမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားထုတ်မှုအောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မူလစာမျက်နှာစောင့်ရှောက်မှုကဒီအလိုဆန္ဒပုံရိပ်ဘုတ်အဖွဲ့အတွက်ထောက်ပံ့ခြင်း, တစ်ဦးချင်းစီ၏အင်အားအောက်မှာဖန်တီးဖြစ်ပါတယ်။
visualization ဘုတ်အဖွဲ့ - ကဘာလဲ?
မည်သည့်အပြားမျက်နှာပြင်တွင်သင်သည်ရှိသည်ဖို့လိုထွန်းတောက်သောရောင်စုံရုပ်ပုံများကိုပူးတွဲ။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့သင်တို့သည်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ကိုဆောင် ခဲ့. နှင့်ပေး၏အဖြစ်ကောက်ရန်လွယ်ကူထိုသို့သောပုံရိပ်တွေ ကောင်းတစ်ဦးစိတ်ဓါတ်များ ။ သင်သည်အမြဲတစေနေ့တိုင်းသူမကိုတွေ့မြင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘုတ်အဖွဲ့ထားပါ။ ထိုသို့သောအလိုဆန္ဒများပုံရိပ်နည်းလမ်းကိုအဓိကအရာသည်အလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ပါသည် - မှန်ကန်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်။ တစ်ဦး session တစ်ခုလုပ်ဆောင်သွားရန်ဒီစွမ်းအင်ကိုသာအပြုသဘောဆောင်သူဖြစ်ရမည်ကြောင့်ဘုတ်အဖွဲ့, ရှိသမျှစွမ်းအင်သိုက်ကိုသက်ဝင်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သာကောင်းတစ်ဦးခံစားချက်အတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ပညာပုံရိပ် technique ကို
အတော်များများကလူနာကနဦး, ဒီသဘောထားကိုလုပ်ကိုင်ဖို့ဆန္ဒ၏ visualization မကြာမီအဆိုးရလဒ်အကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ စိတ်ပညာမှာတော့ပုံရိပ်နည်းလမ်းလူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်များကဒီအလုပ်, လက်ျာ hemisphere အလုပ်မြှင့်လုပ်ဆောင်ပုံတွေကိုတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ပြီး, ဦးနှောက်၏လုပျငနျးညီကယုံကြည်ကြသည်။ သငျသညျမဟုတျဘဲသာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိသမျှဆဲလ်စိတ်ကိုအပေါငျးတို့စိတ်ခံစားမှုကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် - ထို့နောက်အတှေးအများနှင့်အလိုဆန္ဒများ၏ visualization အပြည့်အဝတပ်ဖွဲ့အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ပညာရှင်မကြာခဏအားကစားကြယ်ပွ, ကျောင်းသားများကျောင်းသားနဲ့အတူလက်တွဲပြီးပုံရိပ် technique ကိုသုံးပါ။
သင့်ရဲ့အလိုဆန္ဒအတွက် Tune တစ်ခုကိုပြီးသားစစ်မှန်တဲ့ရောက်လာပြီ, သင်အပြည့်အဝမှာသူတို့ရဲ့အိပ်မက်၏ရလဒ်များကိုခံစားပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပါစို့။ ထူးခြားဆန်းပြားကျွန်းများပေါ်တွင်လျှော့ပေါ့တစ်ခုစျေးကြီးကားတစ်စီး၏ဘီးနောက်ကွယ်မှထိုင်သစ်ကိုသားမွေးအင်္ကျီကိုတိုင်းတာသည်။
သင့်အနေဖြင့်ငုပ်ပြီးပြည့်စုံသူဖြစ်ရမည်, ခေါင်းစဉ်အခန်းကဏ္ဍအတွက်ဖြစ်သဖြင့်, ပြင်ပကနေကိုယ့်ကိုကိုယ်မမြင်နိုင်သငျ့သညျ။
ကြားနာ, အနံ့, အရသာ: အားလုံးတို့သည်အာရုံထိတွေ့ဆက်ဆံ။ , သူ့ပခုံးပေါ်နူးညံ့သိမ်မွေ့သားမွေးအင်္ကျီကိုခံစားရကားအတွင်းပိုင်းသားရေ၏အနံ့, ကမ်းခြေပေါ်တွင်လေတိုက်ဆောင်ခဲ့သောပင်လယ်မှုန်ရေမွှားအသက်ရှူ။
အလိုဆန္ဒနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့ရုပ်ရှင်ရဲ့အကောင်းဆုံးရိုက်ချက် Secure သူသည်အိပ်မက်နှင့်အကူအညီနဲ့အာရုံသို့မပြန်ရပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ပညာရှင် "ဘောင်ကျောက်ဆူးက" ခေါ်ပါ။
အလိုဆန္ဒလွှတ်လိုက်ပါ။ စိုးရိမ်ရန်မလိုခြင်း, အလိုဆန္ဒပြည့်စုံလာသို့မဟုတ်မည်မဟုတ်, အလိုဆန္ဒများကိုသာမှန်ကန်သော visualization အောင်မြင်မှုစေပါတယ်။
visualization မြေပုံအလိုရှိ - မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို?
တစ်ဦးဆန္ဒကဒ်ကိုဖန်တီးရန်, ငါတို့ဖန်ဆင်းသောများ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုကျနော်တို့ကိုအောင်မြင်စွာလိုချင်သောမြင်ယောင်နှင့်အပြည့်အဝတပ်ဖွဲ့အပေါ်အတှေးအများ၏ပစ္စည်းများ၏တရားကို run ချင်သောအရာကိုတစ်ဦးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တိကျတဲ့စိတ်ကူးကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ရုံ paste လုပ်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုအနည်းငယ်သာကူညီနိုင်ပါတယ် - အထက်ပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းကဇုန်၌သူတို့ကိုနေရာချထားခြင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
Feng Shui ၏ plaque ပုံရိပ်အလိုဆန္ဒများ
visualization ဇယားအလိုဆန္ဒများများ၏သဘောပေါက်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့သင့်ခန္ဓာကိုယ်လှည့်နေကြပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ကပြောင်ပြောင်တောက်နှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်ဖြစ်သင့်သည်။ တစ်ဦး visualization ဘုတ်အဖွဲ့အလိုဆန္ဒများကိုအောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
အဓိကအရာ - စနစ်တကျသင့်ရဲ့အိပ်မက်သရုပျဖျောကြောင့်ပုံရိပ်တွေကိုရွေးချယ်ပါ။
လူအပေါင်းတို့၏အရိုးရှင်းဆုံး - ကဒ်တန်ဖိုးများ။ ကျနော်တို့ဘာအိပ်မက်၏ရုပ်ပုံကိုရှာဖွေလျက်, ကဒ်၏အလယ်ဗဟိုတွင်ကပ်, သင့်ဓါတ်ပုံကိုမှလာမယ့်ရန်လိုအပ်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အပေါ့ပါးဆုံးတစ်ခု universal card ကိုတပ်မက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စာရွက်၏ဗဟိုမှာတော့ပတ်ပတ်လည်သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကို post နှင့် - သင့်အိပ်မက်တွေပွညျ့စုံကွောငျးဖျောပွသောပုံရိပ်တွေ။ အဘယ်သူမျှမအထူးသနိုင်ရန်အတွက်။ ဒါကအလိုဆန္ဒများများ၏သဘောပေါက်အကြောင်းရုပ်ရှင်ကိုဖန်တီးရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
imaging ဘုတ်အဖွဲ့ - ဇုံ
တူညီသည့်နေရာများတွင်ဖြန့်ဖြူးဘို့ scheme ။ ဓာတ်ပုံအထက်တွင်သင်သည်သင်၏ပုံရိပ်အိပ်မက်ပူးတွဲချင်တယ်။
Nord - အပေါ်ဆုံးစာရွက်တွင်းကို။
ဆန့်ကျင်တွင် - ထိုဇုန်၏ဘုန်းအသရေ, ထိုပြည်၌သင်တို့သည်အောင်မြင်ရန်ချင်ပါတယ်သောပုံရိပ်, paste နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုဘယ်ဘက်မှ - ဖန်တီးမှုဧရိယာ, ဒီမှာသင်သည်လည်းတစ်တပ်မက်လိုချင်သောအနာဂတ်၏ရုပ်ပုံကိုထည့်သွင်းနိုင်ပြီးအမြိုးသားအအကြောင်းကိုအိပ်မက်မက်။
မိသားစုများအတွက်နေရာတစ်နေရာ - သင့်ဓါတ်ပုံကို၏ညာဘက်ရန်။
အဆိုပါအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဧရိယာကနေရှေ့ဆက်လက်ယာရစ်ကဏ္ဍများများအတွက်ဓာတ်ပုံများကိုနေရာချ ဝိညာဉ်ရေးရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ , ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေး။ သူတို့ကရှိပြီးသားကိုသိမ်းပိုက်ဒေသများအကြားအာကာသအတွင်းကိုဆင်းထားရန်လိုအပ်သည်။ ဘုတ်အဖွဲ့ပုံရိပ် - သူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒများအတွက်ရုန်းကန်အတွက်အလွန်အစွမ်းထက် tool ကို, ဒါကြောင့်အတွေးထွက်ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်ချဉ်းကပ်။
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတစ်ဦးကိုမှန်ကန်နှင့်ပေါင်းစပ်: ပုံရိပ်တွေကိုဖန်တီးရန်3နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
Computer ကို။ သင်တစ်ဦးကွန်ပျူတာဖိုင်များ၏အကူအညီနှင့်အတူတစ်ဦးဘုတ်အဖွဲ့ကိုနေကြသည်။ အဲဒါကို access ကိုသာသင်ကြလိမ့်မည်။ အတော်များများကမိုဘိုင်းဖုန်းအတွက်ရူပါရုံကိုဘုတ်အဖွဲ့ထည့်ပါ။
အစစ်အမှန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သငျသညျဓါတ်ပုံများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုရှာတွေ့ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်းအတွက်, ပုံနှိပ်နှင့်စာရွက်ပေါ်တွင်မှီဝဲ။
ပေါင်းလိုက်သောနည်းလမ်း, အင်တာနက်ပေါ်မှဘုတ်အဖွဲ့မြင်ယောင်သူတို့ကိုထွက် print ထုတ်ခြင်းနှင့်ဘုတ်ပေါ် paste ဖို့ပုံရိပ်တွေကိုရှာပေးထားပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကိုသာဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်အလုံအလောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ - visualization အလေးချိန်ဆုံးရှုံး၏အိပ်မက်နှင့်အတူလိုပါဘူး။ အခြားမည်သည့်အလိုဆန္ဒနှင့်အတူအမျှအာရုံကိုပုံမှပေးဆောင်လျှင်ပြားကူညီပေးပါမည်မြင်ယောင်။ ဤအမှု၌တပ်မက်ခြင်း၏ထိရောက်သော visualization တစ်ဦးအရည်အချင်းများ၏အသုံးအနှုန်းအပေါ်, ဒါပေမယ့်လည်းမှန်ကန်သောရုပ်ပုံပေါ်မသာမူတည်ပါသည်။
သင်ကပုံလှပပါးလွှာရှိရာအခြေခံအဖြစ်သင့်ရဲ့ရုပ်ပုံယူနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့် Photoshop ကိုသုံးစွဲဖို့ပိုပြီးထိရောက်မယ့်, ဒီအစီအစဉ်ကိုပြီးပြည့်စုံသောကိန်းဂဏန်းအောင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
ပါးလွှာစိုက်ပျိုး, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပါးလွှာစိတ်ကူး, visualization ၏စည်းမျဉ်းများအရသိရသည်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းအားဖြင့်, ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခံစားရဖို့ကြိုးစားပါ။
မျက်နှာဖုံးစိတ်ကျရောဂါ - ကဘာလဲကြောင့်စစ်တိုက်ခြင်းငှါအဘယ်သို့?
ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ် - အမျိုးသမီးရောဂါလက္ခဏာများ, အမျိုးအစားများနှင့်မည်သို့စိတ်ကျရောဂါထဲကရသလော
Phobia - အထွဋ်ကိုကွောကျရှံ့
စိတ်ပညာ Phototherapy - နည်းပညာ
သူမသည်တက် လာ. - သူမကမှားခဲ့သည်
ဂျင်မ် Carrey တရားရုံးအဖြူရောင် Catriona ၏အသေခံခြင်းအားလုံးစွဲချက်ကိုပယ်ဖျက်ပေးဖို့လိုလား
မိတ်ကပ် Lana Del Rey
တင့်တယ် swimsuit - အရှိဆုံးစတိုင် fused နှင့်သီးခြားမော်ဒယ်များ
Puff Daddy ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်နာမတော်ကိုပြောင်းလဲ
ကျောင်းအတွက် herbarium အောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
အာလူး - အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ပျက်ဆီး
Apple ကဝမ်းနည်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့ - သူတို့ရဲ့လက်နှင့်အရုပ်